Yini ongayibona futhi uyenze edolobheni laseTaramundi | Izindaba Zokuhamba
Yini okufanele uyibone futhi uyenze eTaramundi
USusana Garcia | | Izindlela zokuphunyuka, Impelasonto, Yini ongayibona
ITaramundi yindawo enegama elicishe lizwakale njengephupho, futhi uma sifika kule ndawo kubukeka sengathi sisezweni elihlukile. Ingabe idolobhana elincane eliphakathi kwezintaba futhi amadlelo aluhlaza angenye yalezo zivakashi ezizuzisayo futhi siyazi nokuthi ngeke kube enye yalezo zindawo lapho ezokuvakasha zikhukhula konke.
La Abantu baseTaramundi empeleni basemakhaya futhi kuyo ungajabulela umlando omuhle futhi ikakhulukazi amasiko awo. Yindawo eseduze kakhulu nomngcele neGalicia, e-Principality of Asturias, endaweni ethule kakhulu yemvelo okungaba ukuvakasha okuhle ukuphumula izinsuku ezimbalwa.
1 Ufika kanjani eTaramundi
2 Indawo yokuvakasha ezindaweni zasemakhaya
3 Izindlela zokuhamba izintaba
4 Vakashela u-Os Castros
5 Izinsika zikaTarundi
6 Izigayo zaseMazonovo
7 Umnyuziyamu we-Ethnographic of Skiing
8 Ushizi lukaTarundi
Ufika kanjani eTaramundi
Ayikho imigwaqo emikhulu noma imigwaqo emikhulu yokufinyelela kuleli dolobha elincane. Kusukela endaweni emaphakathi, besizithola sisedolobheni laseLugo eGalicia, esiseduze impela. Kusuka kuleli dolobha kufanele ulandele umgwaqo N-640 edolobheni lase-A Pontenova, lapho sijika khona sibheke ku-LU-704 ukufika eTaramundi. I-N-640 efanayo ivela eRibadeo, etholakala enyakatho emngceleni ne-Asturias, ngakho-ke ingafinyelelwa kusuka kulawa maphuzu amabili.
Indawo yokuvakasha ezindaweni zasemakhaya
Uma kunokuthile okuthandekayo ngeTaramundi, kungukuthinta kwayo kwasemakhaya okungazange kulahleke ngeminyaka noma ngokukhula kwezokuvakasha. Akuyona namanje indawo yokuvakasha okukhulu, okufanele ithokozelwe. Leli dolobha empeleni lalingenye ye izindawo zokuqala ezazibhekiswe kwezokuvakasha zasemakhaya ezintsha eminyakeni eyedlule, ehlela isigodlo sakhe njengehhotela lezivakashi ezafika zizofuna imvelo, ukuphumula namasiko. Futhi babeqinisile uma kukhulunywa ngokunikela nge-alto entsha futhi ekhetheke kakhulu. Kule ndawo namuhla izivakashi zinemizila yokuhamba izintaba, ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni, imibukiso namasiko amaningi.
Izindlela zokuhamba izintaba
Enye yezinto uTramundi avakashelwa kakhulu kuzo izindlela zayo ezinhle zokuhamba izintaba etholakala maphakathi nemvelo. Kule ndawo bazi kahle ukubaluleka kwalokho abanakho futhi inemizila enakekelwe kahle futhi ebhalwe kahle ukuze izivakashi zikuthokozele ngokuphepha. Kunemizila eyisithupha ncamashi engenziwa ngesikhathi sokuhlala edolobheni. Umzila waManzi, amaFerreiros, amaMill, i-Ouroso, i-Os Teixos ne-Erioá. Yimizila engenziwa kahle ekuseni noma emini uma ithathwa ngomoya ophansi. Kuzo ungazi indawo yemvelo kanye nomasipala abaseduze, kanye namasiko nayo yonke imininingwane emincane enentshisekelo eTaramundi, ngakho-ke kufanele ukwenze.
Vakashela u-Os Castros
Kulelidolobha uyabona enye yezinqaba ezibaluleke kakhulu ze-Asutrias. Sikhuluma ngalezo zakhiwo ezakha amadolobhana angempela emakhulwini eminyaka adlule, angatholakala naseGalicia. Lezi zinqaba kwakuyizakhiwo zamatshe eziyindilinga ezigcinwe kuwo wonke amakhulu eminyaka. E-Taramundi ungahamba nge-walkway ukubona isiza se-Os Castros, okuyigama abalinike lona. Idolobha elisuka kuBronze Age elikhombisa ukubaluleka kwale ndawo njengendawo yokudlula nokuhweba.
Enye ye amasiko agxile kakhulu kuleli dolobha yizindawo zokusika, enziwe ngamasu obuciko angakhohliwe ngokuhamba kwesikhathi. Kubaluleke kakhulu ukugcina amasiko abo ukuthi benze iMuseum of Cutlery, nokuyinto okumele yenziwe. Esikhathini sokusika kukhona zonke izinhlobo zemimese ephaketheni nemimese, eziningi zazo zingenziwa ngezifiso, ngakho-ke kufanelekile ukuthatha isikhumbuzo esivela eTaramundi.
Kulesi sizwe kukhona i- Museum enkulu kunazo zonke eMills eSpain, ngaphezu kokukwazi ukubona izigayo zakudala ezigciniwe nezisasebenza. Kulesi sigcinamagugu singafunda indima ebalulekile yamatshe okusila ekusindeni kwabantu nokuthi bawasebenzisa kanjani amandla wamanzi ukukhiqiza amandla.
Umnyuziyamu we-Ethnographic of Skiing
Kuleli dolobha eliseduze, ungabuyela emuva esikhathini ukuze ufunde kabanzi ngamasiko nomlando wale ndawo. Vuliwe Skis kukhona imnyuziyamu ethnographic ethokozisayo lapho kuqoqwa khona izinto eziningi zasendulo ukukhombisa impilo emakhulwini eminyaka adlule. Uma sinesifiso sokubona okuthile okwedlule kwalezi zigodi, kufanele siye lapho.
Yize e-Taramundi imimese nemimese yokusonga kudume kakhulu, kukhona neminye imikhiqizo eyenziwe ngezandla okumele ibhekwe uma sifuna ukuthatha izinkumbulo ezinhle kakhulu. I- ushizi we-taramundi Kubaluleke kakhulu futhi kwenziwa ngenqubo yobuciko. Kukhona ushizi owenziwe ngobisi lwenkomo noma lwembuzi, amanye ngamantongomane. Awuzizwa uthanda ukuvakashela iTaramundi?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Yini okufanele uyibone futhi uyenze eTaramundi
ISierra de Gredos, imvelo nezinkanyezi
I-Zahara de la Sierra, indawo oya kuyo eCádiz